सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस के गर्ला ? – Kendra Khabar
सर्वोच्चको फैसलापछि कांग्रेस के गर्ला ?
२०७७, ११ फाल्गुन मंगलवार ०८:३६
सम्भावित राजनीतिक दृश्यलाई नियाल्दै नेकपाका दुवै समूहले यतिबेला कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने दुवै पक्षको ठम्याइ छ ।
कांग्रेसले अहिले निर्वाह गरेको भूमिकाले पनि नेकपाका दुवै पक्षलाई इन्गेज गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाप्रति पूर्ण भरोसा छ ।
नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासहितका नेताले लिँदै आएको अडानले नेतृत्वलाई ओलीतिर जान रोक्न सक्ने विश्वास छ ।
देउवा निर्वाचनको पक्षमा खुलेर लागेका छन् तर पौडेल, सिटौलासहितका नेताहरु प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको अडानमा छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भने पनि पुनः स्थापना वा निर्वाचन भन्नेमा कांग्रेसमा एउटै दृष्टिकोण छैन ।
जसले नेकपाका दुवै समूहलाई कांग्रेस आफूतिरै भएको अनुभूति दिइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पुनर्बहाली भनेको तत्कालका लागि समस्याको समाधान त हो तर दलहरूले भनेको जस्तै लोकतन्त्रको पूर्ण पुनर्बहाली होइन ।
अहिले आन्दोलन उठिरहेका बेला यही संविधान, थुप्रै संवैधानिक व्यवस्था र आन्दोलनमा सरिक दलहरूमाथि पनि प्रश्न गरिएको छ । ती प्रश्नको सम्बोधन यिनै संसदीय दल र संसद्भित्रैबाट गरिनुपर्छ तर त्यसअघि संसद्को माहोल भिन्न हुनेछ ।
सरकार बनाउन आवश्यक पर्ने सामान्य बहुमत अर्थात् १ सय ३८ जना विभाजित नेकपाबाट मात्रै पुर्‍याउन भने असम्भव प्रायः छ ।
जसपालाई नै जोड्दा पनि १ सय २४ मात्रै पुग्छ, जसपा–नेकपाको सरकार बनाउन दाहाल–नेपाल समूहले ठूलो मिहिनेत गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर भए त्यसपछि दुईवटा परिदृश्य देखापर्न सक्छन् । पहिलो तोकिएको मितिमै चुनाव हुन्छ, दोस्रो चुनाव हुँदैन । चुनाव भइहाल्यो भने राजनीतिक खिचातानी लयमा आउन पनि सक्छ , कथम् भएन भनेचाहिँ मुलुक अँध्यारो सुरुङभित्र पस्छ । समाचार साभारः कान्तिपुर दैनिक
संसद बैठक पहिले प्रचण्ड–माधव समूहले बोलायो संसदीय दलको बैठक
संसद बैठक सुरु हुन पहिले सभामुखसंग प्रचण्ड–मावध समूहको छलफल
प्रतिनिधिसभा बैठक आज, नेकपाका दुबै समूह सत्तापक्षको एउटै रोमा आमुन्ने–सामुन्ने
पुर्व सभामुख महरा र विप्लव बीच भेटवार्ता
संसद बैठकमा नेकपाका सांसद एउटै लहरमा
फरक क्षमता भएका बालबालिका अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन : मन्त्री नरदेवी पुन